Isikhwama se-Fibc, i-Bulk Bag, i-Jumbo Bag, i-Big Bag - i-JO EE
Inkampani yami yakha ngo-2008 Okwenziwe ngokomsebenzi, isikhwama se-FIBC, isikhwama esiningi, isikhwama seJumbo nesikhwama se-PP eselukiwe iminyaka engu-13.Sisebenzisa ikhwalithi ephezulu ye-petrochemical polypropylene ne-polyethylene njengezinto ezingavuthiwe. Isivinini sebhulashi esithuthukile, izintambo zokukhiqiza ze-PE Coating 2. Sineqembu lokuphatha elihle kakhulu.
Bulk FIBC Isitsha Izikhwama Manzi 1000kg For ...
High Quality Esikhulu Polypropylene Izikhwama Jumbo Siz ...
Isitsha esinobuningi esiphakathi nendawo
Iphakethe lesikhwama esiningi lephakethe lesikhwama se-Iron ore
Ama-iron ores amatshe namaminerali lapho insimbi yensimbi ingakhishwa khona kwezomnotho. Ama-ores ngokuvamile acebile ngama-oxide ensimbi futhi ayahluka ngombala kusuka kokumpunga okumnyama, ophuzi ngokugqamile, noma onsomi ojulile ngokubomvu okubomvu. Insimbi ivame ukutholakala ngesimo se-magnetite (Fe3O4, 72.4% Fe), hematite (Fe2O3, 69.9% Fe), goethite (FeO (OH), 62.9% Fe), limonite (FeO (OH) · n (H2O) , 55% Fe) noma i-siderite (FeCO3, 48.2% Fe).
Isikhwama se-FIBC, isikhwama se-jumbo, Izikhwama eziningi zisetshenziselwe uhla lwezimboni, ezolimo, ezemithi kanye neminye imikhiqizo. Kodwa-ke, kunokwanda okukhulu kwesidingo sezikhwama eziningi ngenxa yokwanda okuqhubekayo emikhakheni, njengamakhemikhali nomanyolo, ukudla, ukwakhiwa, ezemithi, ezezimayini, nokunye. Ngaphandle kwalokho, ukwanda kwamanani amabhizinisi nemikhakha yezokukhiqiza kunezela ezikhwameni eziningi ukukhula kwemakethe.